Wararka - Sidee loo xidhaa dayactirka jijin caqli badan?
1. Nadiifi qalabka casriga ah. Si joogto ah u nadiifi curcuradaada iyo jijimooyinka caqliga leh, gaar ahaan jimicsiga ka dib, dhidid, ama taabashada maqaarka walxaha sida saabuunta ama saabuunta. Walxahaasi waxay ku dhegi karaan gudaha giraanta; Ha u isticmaalin saabuunta guriga lagu nadiifiyo jijimadda. Taabadalkeed, isticmaal saabuun saabuun la aan ah, si fiican u biyo raaci oo ku qallaji tuwaal jilicsan. Dhibco ama nabarro aan sahlaneyn in laga soo saaro, ku caday burush jilicsan oo qoyan oo raac tallaabooyinka kor ku xusan.
2. Qallaji. In kasta oo aaladaha casriga ahi ay yihiin kuwo aan biyuhu xirin, xirashada jijin qoyan muddo dheer ayaa waxyeello u leh maqaarkaaga; Haddii jijimadu qoyso, sida dhidid ama qubays ka dib, dhaq oo qalaji ka hor intaadan dib u dhigin. Hubso in maqaarkaagu qalalan yahay kahor intaadan saarin jijin.
3. Naso curcuradaada. Hubso in jijimadu aysan aad u dhaganayn. Hubso in jijimadu aysan aad u dhaganayn. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka tagto meel u dhexeysa kooxda iyo curcurka farta yar si ay gadaal iyo gadaalba ugu sibxato. Haddii aad u isticmaaleyso si aad u hesho akhriska garaaca wadnaha ee ugu saxsan ee suurtogalka ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad xirto jijin inta aad jimicsiga sameyneyso. Hadday sidaas tahay, xusuuso inaad dib u hagaajiso isku-dhafka ka dib jimicsigaaga. Isqabqabsiga iyo ku xirnaanshaha muddo dheer ayaa laga yaabaa inay ka careysiiyaan maqaarkaaga, markaa ka saar jijinka saacad ka dib dharka dheer.